कमला मृत्यु घटना थप रहस्यमय, वि ष खा’एकी थिइनन् कमलाले ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कमला मृत्यु घटना थप रहस्यमय, वि ष खा’एकी थिइनन् कमलाले !
मोरङमा कमला आचार्य मृत्यु घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ । उनलाई केही ब्यक्तिले रुखको फेदमा छटपटाउँदै गरेको अवस्थामा भेटेका थिए । उनी त्यसरी दुखमा हुँदा केहीले भने भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि त्यो भिडियो भाइरल भएको हो । भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा भिडियो पिछाडि हासेको र डोज नपुगेको भन्दै मजाक गरेको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ ।
घरवाट मामा घर जान्छु भनेर हिडेकी छोरीको यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएको देखेर परिवारका सदस्य भने अचम्ममा परेका छन् । उनका बुवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने घरमा आमा वे होस जस्तै बनेकी छन् । जंगलमा त्यस्तो अवस्थामा फेला परेकी कमलालाई दाउरा घाँस गर्न गएकाहरुले पानी र फ्रुटी खुलाएका थिए ।
झनझन रहस्यमय बन्दै गएको छ कि कमलाको मृ त्यु पछि पनि उनको फेसबुक एकाउन्ट खुलेको थियो र अनलाईन देखिएको थियो र उनको म्यासेज र पोस्ट पनि डिलिट गरिएको दिदी बताउँछिन् ।
आफुलाई गाह्रो भएको र मनलागेर यहासम्म आएको कमलाले रुदै बताएकि थिइन ।आफ्नो महिनावारि पनि तीन महिना रोकिएको र अहिले भएको उनले बताएकी थिइन् । त्यस्पश्चात आफुलाई अत्याधिक तिर्खा लागेको कमलाले बताइन
।त्यस्पछि उनिलाई पानी र फ्रुटि ख्वाएको प्रत्यक्षदर्शी दिदिले बताइन ।आफू आन्टिसग बस्दै आएको घर तेह्रथुम भएको र कृषिमा अध्ययन गर्दै गरेको पनि उनले बताएकि थिइन।बारम्बार आफुलाई पि साब लागेको भनिरहेकी थिइन् ।
कमलालाई अन्ततः केही समय पश्चात् अस्पताल लगिएको थियो तर उनको दुखद नि धन भएको थियो । यशोबिचमा अहिले भने कमलाको मोबाइलको जाँच गर्दै गर्दा १३० पटकसम्म उनको फोनमा कल आएको भेटिएको छ । आखिर त्यो कमलाको अन्तिम घडिमा यसरी यति धेरै फोन गर्ने ती व्यक्ति को थिए अनुसन्धान भइरहेको छ ।